Rastra Daily | कुन उमेरलाई ‘पहिलो पटक’ यौनसम्बन्ध राख्ने उचित उमेर मानिन्छ ?
त्यसैगरी अमेरिकी मनोचिकित्सक डा. मर्लिन वाकरले १८ वर्षको युवावस्थामा यौनसम्पर्कको चाहना अति उच्च विन्दुमा पुग्ने बताएका छन् । उनले यो उमेर समूहकालाई हरेक क्षण उत्तेजित र मनमा अनेकौँ कामुक विचारहरु आउने बताएका छन् । एजेन्सी
यसरी हटाउन सकिन्छ कपडामा लागेको मसिको दाग
एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको ११ प्रश्नको जवाफ यस्तो छ (पूर्ण पाठ)
सपनामा के देखेमा अशुभ मानिन्छ ?
फिनल्यान्डमा वस्ने मानिस सबैभन्दा खुसी